Ny torolàlana anao amin'ny fifindrana mankany Aostralia hanombohana orinasa vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Ny torolàlana anao amin'ny fifindrana mankany Aostralia hanombohana orinasa vaovao
Ny fifindra-monina any Aostralia hanomboka fiainana vaovao dia nofinofisin'ny olona maro, indrindra rehefa mangatsiaka, maizina ary ory ny toetr'andro eto. Olona iray tapitrisa mahery avy any Angletera no nifindra tany Aostralia mba hankafy ny fari-piainana avo lenta, ao anatin'izany ny mpampiasa vola, ny mpividy orinasa ary ny mpandraharaha vaovao maniry fatratra. Na dia iharan'ny fepetra henjana aza ny fifindra-monina Aostralianina ary misy sarany fangatahana aloa, ny governemanta Aostraliana dia mazoto mandrisika ny fifindra-monina izay hampisondrotra ny harinkarem-pirenena. Ahitana tombony lehibe eto Aostralia ny indostria isan-karazany ao anatin'izany ny fizahan-tany, fitrandrahana, tontolo iainana, mineraly, TIK, siansa, serivisy ara-bola, bioteknolojia, teknolojia fambolena ary maro hafa. Misy orinasa kely an-tapitrisany ao amin'ny firenena mandrafitra ny 40% amin'ireo mpanondrana entana. Ity no zavatra tokony ho fantatrao raha mieritreritra ny hifindra any Aostralia ianao hanangana orinasa.
Raha mieritreritra ny hanangana orinasa any Aostralia ianao, dia iray amin'ireo zavatra voalohany tokony hodinihina Visa any Aostralia mety indrindra aminao. Betsaka ny visa momba ny fifindra-monina misy, na izany aza, ny visa momba ny fahaiza-miasa dia matetika no safidy tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa vola sy tompona orinasa. Ny visa momba ny fahaiza-manao momba ny fifindra-monina dia mirakitra sokajy efatra lehibe, dia ny tompona orinasa, ny Executive Executive, ny Investor ary ny talenta momba ny asa aman-draharaha. Matetika, ny mpangataka dia homena visa efa-taona voalohany vetivety ary afaka mangataka ny hipetrahany maharitra any Aostralia raha misy porofon'ny haavon'ny fampiasam-bola na asa ataonao izay notazoninao nandritra ny fotoana iray.
Fametrahana ny orinasanao:
Vantany vao nifidy ny safidy visa ilaina indrindra ianao UIS Australia, misy safidy roa azo atao ho an'ireo izay te-hanana orinasam-pandraharahana any Aostralia. Azonao atao ny manangana biraon'ny sampana izay misoratra anarana toy ny manao orinasa any Aostralia na mahazo na manangana orinasan-tsampana aostralianina miaraka amina tale iray farafaharatsiny izay mponina aostralianina. Zava-dehibe ny manamarika fa ny tena mampiavaka ireo safidy roa ireo dia amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mila mametraka ny kaontiny any amin'ny Australian Securities and Investment Commission (ASIC) ny sampana iray, etsy andaniny kosa dia mila manao ny biraon'ny sampana. ity any amin'ny firenena misy ny orinasa any ivelany.
Misy samihafa fitsipika, lalàna ary fahazoan-dàlana manodidina ny fananganana orinasa any Aostralia ara-dalàna, noho izany dia mendrika tokoa ny maka ny fotoanao mba hidiranao amin'ny serivisy mpivarotra orinasa matihanina izay afaka manampy anao hitety ilay rafitra. Ny mpivarotra raharaham-barotra dia afaka manampy anao hiatrika ny fizotran'ny sarotra amin'ny fividianana orinasa aostraliana na ny fifindrana mankany amin'ny firenena hananganana orinasa vaovao. Miasa amin'ny antoko fahatelo mahaleo tena izy ireo izay manome torohevitra tsy miangatra ho tombontsoanao indrindra. Ny mpampindram-bola Aostraliana tsara dia hanana fahalalana marobe eo an-toerana momba ny lalàna ara-bola, fahazoan-dàlana ary fahazoan-dàlana, fiantohana, vidin'ny trano sy maro hafa.
Fampiasam-bola amin'ny orinasa Aostraliana:
Ny Visa natokana ho an'ireo mpifindra monina any Aostralia dia tsy ho an'ireo maniry hanomboka na hividy orinasa ao amin'ny firenena ihany. Azonao atao ihany koa ny mahazo visa raha mitady hampiasa vola be amin'ny orinasa iray aostraliana efa niorina. Eo ambanin'ny visa momba ny fanavaozana ny asa aman-draharaha sy ny fampiasam-bola, azonao atao ny manamarina ny hiditra ara-dalàna any Aostralia raha maniry hampiasa vola amin'ny orinasa eo an-toerana ianao. Mba hahafeno fepetra, tsy maintsy mitady vola be ianao amin'ny faritany na fanjakana, ary mikasa ny hitazona ny fampiasam-bola sy ny asa aman-draharaha any Aostralia raha vantany vao matotra ny fampiasam-bola voalohany. Ny orinasanao sy ny fanananao manokana mandritra ny roa taona teo aloha dia mila mihoatra ny vola iray ihany koa.
Mahazo famatsiam-bola any Aostralia:
Raha te-hifindra any Aostralia ianao hanangana orinasa vaovao, ny mpandraharaha ara-barotra dia afaka manampy anao hitety ny tontolon'ny famatsiam-bola sy ny famatsiam-bola eto amin'ny firenena. Tsara ny manamarika fa ny banky aostralianina dia manana laza tsara amin'ny fandavana ny fangatahana findramam-bola kely, na izany aza, misy safidy hafa azo dinihina. Ireo mpampindram-bola amin'ny Internet dia malaza amin'ireo orinasa madinidinika ao Aostralia izay misy mpampindram-bola zato mahery izay manome famatsiam-bola kely amin'ny lafiny azo antoka na tsy azo antoka.
Raha mitady ny fiovan'ny toerana sy ny hafainganana ianao dia mety ny fanapahan-kevitra mankany Aostralia hanomboka na hampiasa vola amin'ny orinasa.